Oku yi 5 bayotywe kwaye 10 paylines free spins slot machine game. Kuye yaseTshayina kwiintsomi isihloko ingqalelo wenamba ophaphazelayo wasentsomini. Le slot yonke malunga aziyeki abakhululekileyo zasendle kwakhona olusukela-osemqoka. Ukuba slot abangaboniyo entle iimpawu umdla oku slot na izimuncumuncu yayizele.
Malunga nabaqulunqi Tian Long Slots
Le slot Imnandi siphuhliswa liqela encinane inkampani isoftwe ekuphuhliseni Games Lab. yasekwa ngonyaka ka 2008 le nkampani igxile i-Gaming. They have been developing free spins slot machine game from 2013 kwaye benza inkqubela ephawulekayo. Kokuba ekuphuhliseni kumagama ezininzi enkulu imidlalo kwishishini.
Umxholo intsomi ngokusekelwe inamba esiphaphazelayo wadalwa kakuhle. Imvelaphi izele imithi cherry kunye elinesandi leyo uziphumze kakhulu. Because this free spins slot machine game has a mythological theme the symbols are bonsai trees, iingqalutye, iintyatyambo, iintaba, amaso kunye pagodas.
Uphawu zasendle ku inamba kwaye kuphela amazwe phezu bhobhile ezintathu phakathi oko 2,3&4. Oku singamiswa endaweni zonke iisimboli ngaphandle uhlwayela leyo phoenix. Iimpawu ibhonasi iquka:
aziyeki ezamahala- xa ufika phoenixes ezintathu phakathi 3 namacwecwe lo msebenzi icukumisiwe. Uya kunikwa 15 aziyeki ivideo ngexesha v eziya kabini uyaphumelela. Ukuba ufika 3 okanye ngaphezulu kwezi saa ngexesha aziyeki ivideo, L kwakhona lasendle- spin enokwenzeka kunye aziyeki ezininzi kuxhokonxwa igqampe Uchithachitha ngaphezulu ezintathu.
Ukwandisa Wild uyafunwa- Lonke ixesha zasendle livela i bhobhile lo msebenzi icukumisiwe. bayotywe nganye equlathe isimboli asendle aya kumisa nesimboli zasendle ndibazalisa ngokunxila bonke izikhundla. Zonke uyaphumelela ziya kuhlawulwa kwaye uya kufumana spin ezamahala. Ukuba ilizwe zasendle ngexesha oluqhubekayo kwakhona aziyeki-, oku kuya kuba sisiqalo osemqoka kwakhona.
Ubungakanani bet incinane 10p kwaye ubungakanani bet obubona £ 250. This free spins slot machine game can be played on various platforms including your laptops, amacwecwe kunye athwalwayo yakho.
Kwimizobo ezintle le slot kukubasela ingqondo yakho. Kwaye nangona oku slot ingakhangeleka lipholile kuwe, iimpawu zayo evuyisayo. This free spins slot machine game is all about re-spins and you will get lots of them. Lo mdlalo kukho isibheno ebonakalayo kunye Gameplay emangalisayo. Zonke izinto enye game slot kwenza oko kufanelekile lonke ixesha yakho nemali.